Ny Harenan’ny Iraniana Sy Ny Hevitr’I Ganji · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 17:37 GMT
Vao tsy ela akory ny Chicago Tribune no nitatitra fa nandà vavolombelona lehibe iray avy amin'ny Oniversiten'i Chicago ny mpitsara federaly Amerikana tamin'ny Fampiakarana fitsarana nataon'ireo olona sisa velona tamin'ilay fandarohana baomba nataon'ny Amerikana ny taona 1997 tany Jerosalema nikatsahana ny famarotana ireo zava-tsarobidy Iraniana (takelaka tranainy) tao amin'ny tahirin'ny Oniversite mba ho fanonerana amin'ny maha firenena mpiray tsikombakomba an'i Iran amin'ny asa fampihorohoroana. Ireo takelaka ireo dia ampahany amin'ny antontan-taratasim-pitantanana isan'ny lehibe tamin'ny andron'ny fitondran'ny Mpanjakan'i Achaemenita Darius I, izay nandrakotra 20 taona teo ho eo 500 taona talohan'i J.K. Talohan'ny nahitàna ireny takelaka ireny, dia niankina tamin'ny loharano ivelany fahatakarantsika ny fanjakan'i Achaemenid. Blaogera marobe no nanomboka nanentana tanaty aterineto mba hisorohana ny fivarotana azy ireny an-tery.
Jalil Doostkhah, Profesora teo aloha tao Isfahan sady blaogera, no nilaza fa tokony hataontsika izay handrenesana ny feontsika ka hitaky ny famerenana ny harena ara-kolotoralintsika any Etazonia 70 taona aty aoriana. Nampiany koa hoe tsy mila ny dollar anareo izahay hamerenana ny fahafahanay (Persian). Nampitahainy mihitsy aza io hetsika io tamin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila Amerikana niseho ny taona 1953 nanoherana an'i Dr.Mossadegh, Praiminisitra izay nanindrahindra ny solika Iraniana. Hoy ilay bilaogera nanampy
Nanoratra ilay blaogera fa ireo takelaka tranainy momba ny zon'olombelona sy ny fiarovana ara-sosialy ho an'ny mpiasa ireo dia efa lasa babo 70 taona lasa izay tany Etazonia. Taorian'ny 2500 taona dia mbola mirehareha amin'ny razantsika isika ary tsy nanana na inona na inona isika raha tsy nisy ny ezaka nataon'izy ireo (Persian).
Ao amin'ny Fanous, bilaogy iray iraisana, no namakianay fa toa tsy asiana dikany ny firenena Iraniana – Tsy lovan'i Ahmadinejad na an'i Khamenei fotsiny ihany io…. toa ny hoe tsy misy dikany akory izany zon'olombelona izany ivelan'i Etazonia ! (Persian)
Bilaogera maro no niresaka harena hafa : fahafahana. Akbar Ganji, mpanao gazety mpanohitra, no nande tany Eoropa nandritra ny fotoana vitsivitsy handray loka isan-karazany, isan'izany ny Golden Pen. Nohararaotiny izay fotoana rehetra nahafahany nanaovana fanadihadiana sy nizaràna ny heviny momba ny demaokrasia. Bilaogera vitsivitsy ihany no miady hevitra amin'ilay hevitr'i Ganji.
Aseman Hameh Ja Abi Nist nilaza fa ratsy ny sary asehon'i Iran an'izao tontolo izao. Raha te-hanova ny sarintsika eo amin'ny karapanondrontsika isika ka te-hampiseho amin'ny firenena hafa fa i Ahmadinejad, Ejehi (Minisitry Ny Fahalalana) … [tsy] mampiseho ny firenena Iraniana dia isika no tokony hanao ezakat (Persian). Hoy izy nanohy izany
Manohana ny hevitr'i Ganji momba ilay grevy tsy hihinanan-kanina mandritra ny telo andro hisarihana ny sain'izao tontolo izao momba ireo gadra politika i Mizegerd Yek Nafare. Nanome folo andro ho an'ny Governemanta Iraniana i Ganji hoy ilay blaogera mba hamoahana an'i Asdanloo, izay mpitarika ny sendikan'ny mpiasa mpitondra fiara fitateram-bahoaka; Mosavi Khoeini, sy ilay solombavambahoaka teo aloha ao amin'ny Parlemanta sady mpikaroka Ramin Jahanbegloo. Nilaza ilay blaogera fa raha tsy mivoaka ny fonja anatin'ny folo andro izy ireo, dia tokony hanao grevy tsy hihinan-kanina mandritry ny telo andro ny Iraniana, araka ny soso-kevitra natolotr'i Ganji. Eo anoloan'ny foiben'ny Firenena Mikambana ao New York no hanaovan'i Ganji izany ny 13 ka hatramin'ny 16 Jolay (Persian).